Ku safrida eyga - Maxaad ka fekereysaa
Ka hor intaanan la socon eeyga
Waxyaabaha loogu talagalay farmashiyaha xayawaanka
Maxaa ka mid ah boorsada eyga?
Tan iyo ugu dambeyntii waxay ku jirtaa fasaxa qoyska ee u qalantaa, laakiin waxa la samaynayo sanka la jecel yahay? Waxay noqotaa mid aad u caan ah oo loo yaqaan 'eeyga' iyada oo la raacayo safarka weyn halkii ay ku wareejin lahayd asxaabta, qaraabada ama eeyga eyda. Laakiin marka ey la safreyso eey waa in wax badan la fekeraa!
Dhamaantiis, eeyaha intooda badani waa xubin buuxda oo ka mid ah qoyska. Qoyska kasta ee labaad waxay qorsheynayaan fasax sanadeed sanadlaha ah, taas oo ku kordhisa wax badan oo ku saabsan ururinta iyo qorsheynta. Maxaad u baahantahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid iyo waxa loo baahan yahay in la sameeyo oo lagu caddeeyo fasaxa ka hor, waxaad ka heli doontaa halkan.
Ku safrida eyga
Haddii mid ka mid ah uusan dooneynin in uu iska daayo shirkada caanka ah ee afarta af-duuban ee fasaxa waddamada dibedda, waa inuu marka hore ka fekero meel ku habboon. Dhamaan dalalka oo idil maahan. Sidaas darteed aadanaha oo keliya, laakiin sidoo kale eyga ayaa ku raaxeysan kara fasaxa si buuxda, sidaas darteed waa inaad la qabsataa baahida shakhsiyeed ee dhammaan kaqeybgalayaasha.
Wixii eeyaha, waa wax badan oo wanaagsan marka aaney aad u kululaan oo qoyan. Intaa waxaa dheer, waa in uu jirku hoos u dhaco eeyga waa in la siiyaa fursada ah in uu ka fariisto geeska mugdiga ah ee fasax guri ama guri.
Ma jeclaan lahayd inaad fasax ku qaadato hudheelka, si toos ah u waydiiso eeyaha loo ogol yahay hudheelka. Inta badan, si kastaba ha ahaatee, tani waxay suurtogal u tahay wax yar oo dheeraad ah.
Waa in aad si foojignaad leh u bixiso dhulka. Eeygu miyuu ku jiraa dhammaantood? Waa maxay xeerarka loogu talagalay eeyaha hagaya eyga? Sidee safarku u socdaa - baabuur, tareen ama xataa diyaarad?
Ma aha in la iska indho tiray shuruudaha gelitaankataasi way kala duwanaan kartaa dalka oo dhan. Macluumaadkan waxaa laga heli karaa inta badan bogagga shabakadaha garoomada diyaaradaha (haddii safar uu ku xiran yahay diyaarad) ama Xafiiska Arimaha Dibadda. Tusaale ahaan, eygu waa in la tallaalaa ugu yaraan 6 toddobaadyadii ka horreeyey rabshadaha markaad safar dibadda ah, baasaboorka xayawaanka waa in dabcan la qaadaa.
Horeba dhowr toddobaad ka hor bilawga fasaxa dheeraadka ah, waa inaad sankaaga furka u soo bandhigtaa dhakhtarka xoolahaaga oo aad marisid baaritaan dhamaystiran. Haddii talaalada weli wali loo baahan yahay marka loo eego shuruudaha gelitaanka dalxiiska fasaxa, kala hadal dhakhtarkaaga isla markiiba ka dib.
Dhakhtar xoolaad oo wanaagsan ayaa markaa ku tusaya wadahadal kasta oo khatar ah oo ku yimaada meeshii uu ku socdo / ku socdo dalka aadka udheer oo sharxi doona wixii taxadar ah in la qaado marka ay dhacdo kiis kasta.
Gaar ahaan xayawaanka dibedda ah ayaa inta badan halis ugu jira cudurrada aan laga yaabo inay wax ka qabtaan Germany. Leishmaniasis, heartworms iyo ehrlichiosis ayaa ah wax yar oo ka mid ah cudurrada kaneecada iyo cudurada dheef-shiid kiimikaadka oo si dhakhso ah u dila. Marka la eego ixtiraamkan: Digtooni ka fiican intii aan la ii dhaafin.
Marka la xirayo, sidaas awgeed waa muhiim in la isku daro farmashiyaha xayawaanka yaryar, oo aan ka mid ahayn dawooyinka shakhsiga ah ee eygaaga, laakiin sidoo kale waxyaabo aan ka maqnaan fasaxyada:
- Badbaadinta qorraxda eeyaha dhar gaaban
- Caws-qabad, faashad faashad, farsamooyin nadiif ah
- Ku calaamadee cambe
- jeermis dilaha
- Eye iyo maqaar dhegta
- Kiniiniyada dhuxusha
- Foornada elektarooniga ah
- Liiska dhakhaatiirta xoolaha iyo xarumaha caafimaadka xoolaha ee goobta
Haa, ma aha oo keliya bini'aadanku waxay u baahan yihiin boorso. Eygu waa inuu, haddii uusan aheyn shandado gaar ah, wuxuu haystaa wax kasta oo uu u baahan yahay nasasho iyo farxad joogta ah. Iyada oo la soo saaray liiska hubinta ee horay loo soo sameeyay waxaad si sahlan u hayn kartaa wadada
Muhiimad halkan - si ka duwan nooca dadka doonaya in ay soo ogaadaan waxyaabo cusub oo ku saabsan fasaxa - waxyaabo la yaqaan oo eyga ogyahay oo jecel yahay guriga. Tani waxay u sahlaysaa eyga in uu dareemo meel ka fog guriga.
Xayawaanka eey markaad la safraysid eey ka mid yihiin:
- Cuntada caadiga ah, daaweynta, lafaha
- Cuntada iyo cabitaanka baaquli
- Baska kubbada / barkimada / buste
- Iyada oo ku xiran heerkulka mashiinka qaboojinta mashiinka
- Dhalada biyaha lagu safro
- xayawaanada / xayawaanka cufan leh
- Farmashiyaha socdaalka oo qaabeeya
- Maqaarka, haddii loo baahdo
- Leash, dunta, qoorta
- Cinwaanka cinwaanka aqalka / hotelka & lambarka taleefanka
- Kotbeutel, curdida ooh
- Baasaboorka dalxiiska ee Midowga Yurub
- Dukumeentiyada caymiska mas'uuliyadda
- Daryeelka dabka, indhaha iyo jaakad
- jaakada nolosha
Miyaad wax walba ka fikirtay si eeygaagu u dareemaan sida ugu badan ee fasaxa sida aad sameyneyso? Liis-hubineed ma saxan yahay sanduuqda gaadiidka eeyda ee loo yaqaan 'dogs transportation cartoon' oo loo simay xaaladaha duulimaadka iyo baasaboorka xayawaanka ku jira?
Kadibna waxaan kuu rajeyneynaa fasax farxad leh oo weyn eeyga!
Midabaynta bogga cunugga ee eyga
Midabaynta bogga eeyga ee wadnaha
Sida loo riixo eyga
Midabaynta bogga eyga
Midabaynta bogga eyga iyo cunugga